महामारीको सामना गर्न तयारीमा अब ढिलो नगरौँ - Online Majdoor
महामारीको सामना गर्न तयारीमा अब ढिलो नगरौँ
कोभिड–१९ महामारी यसपटक झन् तीव्रगतिमा फैलिँदै गरेको समाचारले सर्वसाधारणलाई त्रस्त बनाएको छ । भारतमा दिनमै लाखौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भेटिएपछि रोजगारीको निम्ति त्यता गएका नेपाली स्वदेश फर्किने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल भित्रिने २०–३० प्रतिशतमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । मङ्गलबारको तथ्याङ्क अत्यासलाग्दो छ, दैनिक दशौँ हजार सङ्क्रमित हुनसक्ने अड्कल गरिएको छ । यतिबेला सरकारको खोजी भइरहेको छ । सङ्क्रमित आइसोलेट गर्नुपर्नेमा सरकार आफै जनतासँग आइसोलेट भइरहेको छ । अबका केही दिनमा महामारी अझ डढेलोसरि फैलिने सम्भावना छ । किनभने, सरकार जनस्वास्थ्यप्रति पूर्णतः असंवेदनशील छ ।
दुई वर्षअघि आएको महामारीको पहिलो लहरमा सरकारको तयारी केही थिएन, जनताले सहजरूपमा लिए । तर, कुकुरको पुच्छर बा¥ह वर्ष ढुङ्ग्रोमा राख्दा पनि नसोझिएजस्तै पटक्कै नसुध्रिएको सरकारको कारण दोस्रो लहरमा जनताले ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो । विज्ञले तेस्रो लहरको चेतावनी दिँदादिँदै पनि गल्ती दोहो¥याइँदै छ, तेस्रो लहरको जोखिम अझै बढ्ने सम्भावना तड्कारो छ ।
सरकारले अझै पनि क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । भारतबाट फर्किएका नेपाली सीधै घर जान बाध्य छन् । विदेशबाट आएका सबैको कोरोना परीक्षण गरिएको छैन । खुला सीमाको कारण भारतबाट आएका बाटै कोभिड–१९ महामारी फैलिएको भन्ने जान्दाजान्दै सीमामा आवश्यक कडाइ गरिएन । आइसोलेसन सेन्टर बनाउने सरकारको निर्णय कागजमै सीमित भयो ।
महामारीको चेन ब्रेक गर्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र सङ्क्रमितलाई आइसोलेनसनमा राख्नैपर्छ । तर, सरकारले कहिल्यै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जाँगर चलाएन । दैनिक ५० हजारभन्दा बढी कोभिड परीक्षण गर्ने क्षमता भएर पनि काम भएको छैन । स्थानीय तहहरूले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् ।
महामारी नियन्त्रणको निम्ति खोप एउटा राम्रो उपाय हो । दैनिक ५ लाख जनालाई खोप दिने योजना घोषणामात्र भयो । काम भएन । देशभरमा करिब ३५ प्रतिशतले मात्र खोप लगाएका छन् । बुस्टर डोज लगाउन पनि ढिलो भइसकेको छ । देशमा पुग्दो खोप हुँदाहुँदै पनि लगाउने कामसमेत गर्न नसक्ने सरकारको भर कसरी गर्ने ?
सिकिस्त बिरामी भएकाले अस्पतालमा बेड पाउने कि नपाउने ? अहिले पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । अक्सिजनको हाहाकार फेरि नहोला भन्न सकिन्न । अक्सिजन नपाएरै विगतमा अकाल कैयौँले मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो । अस्पताल बेड, आइसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थामा अबको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । अब ढिला कदापि गर्नु उपयुक्त छैन ।
नेमकिपा र कोरियाली मजदुर पार्टीबीच शुभकामना आदानप्रदान